Ogaden News Agency (ONA) – Kal-fadhigii Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya OYSU oo si habsami u socda
Kal-fadhigii Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya OYSU oo si habsami u socda
Posted by ONA Admin	/ January 3, 2012
Waxaa hall-ka shirarka ee magaalada Frankfort si habsami ah uga socda kal-fadhigii 2aad ee Uruka Dhalinta iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) ay isugu yimaadeen. Shirka ayaa maanta waxuu ku saabsanaa warbixinadii ay soo gudbinayeen faracyada ururka OYSU uu ku leeyahay aduunka warbixinaadsoo sida uu na soo gaadhsiiyay wariyaha wakaaladda ONA dhamaaday muddo laba saacadood ka hor. Warbixinada faracyada ay soo gudbiyeen ayaan iyadoo tafatiran aan soo gudbin doonaa marka laga soo dareero shirka.
Waxaa hadan bilaabmay siminaaro la siinayo dhalinayarada shirka ka soo qayb-gashay oo ku saabsan kor u qqadita wacyigooda siyaasi iyo ururnimo. Waxaa ku xigi doona oo siminaaradaa ka dib bilaaban doona qorshe sanadeedkii ururka oo lagu eegi doono hawlaha ururka OYSU ee sanadka 2012.
Waxaad halkan ka daawataan qayb ka mid ah sawirada naga soo gaadhay shirka ood kaga bogan doonto habsamida uu shirka u socdo iyo ergooyinka ka soo qaybgalay shirka ay ka mid yihiin madaxda JWXO oo uu hogaaminayo gudoomiyaha Adm. Maxamad C. Cismaan.